အ​ညောင်းမိ တစ်ကိုယ်​လုံး နာကျင်​ ကိုက်​ခဲ ​နေသူများ တုပ်​​ကွေး ဖျားနာ ခံစား​နေရသူများအတွက် ဆေးစွမ်းကောင်းလေး – WunYan
“လက်​​တွေ့ ​ဆေးစွမ်း ​ကောင်း​လေး ​ကြော်​ငြာ​ပေးပါရ​စေ”
အ​ညောင်းမိလို့ ထိုင်းမှိုင်း​နေသူများ တစ်ကိုယ်​လုံး နာကျင်​ ကိုက်​ခဲ ​နေသူများ ရာသီ ​ပေါ် အ​ညောင်းမိ တုတ်​​ကွေး ဖျားနာ ခံစား​နေရသူများ ဤ ပုံပါ အပင်​ကို အရွက်​ အမြစ်​မကျန်​ ပြု တ်​​သောက်​ခြင်းဖြင့်​ ​ပျောက်​ကင်းနိုင်​ပါသည်​။
အပင်​နာမည်​က ​တော​မြေပဲပင်​ ပါ။ ​ဒေသအလိုက်​ အ​ခေါ်​ဝေါ် ​ပြောင်းနိုင်​ပါသည်​။ ​နောက်​ထပ်​. ​ကျောက်​ကွဲပင်​လို့လဲ ​ခေါ်ပါ​သေးသည်​။ ဆီး​ကျောက်​တည်​ ​နေသူများ ​သောက်​​ပေးပါက ကျောက်​ကွဲ​ကြေ​စေပြီး ပျောက်​ကင်းနိုင်​သည်​ဟူ၏။
ပုံပါ. ဦး​လေးကြီး (ကပ္ပိယ) နှင့်​ မိမိတို့ ကိုယ်​တိုင်​ လက်​​တွေ့ဖြစ်​ပါသည်​။ ဘေးဘယာ​တွေ ​ဝေးကွာကြပါ​စေ။
Credit : စိုက်​ပျိုး​ရေးနှင့်​ အ​ထွေ​ထွေဗဟုသုတ
“လကျတှေ့ ဆေးစှမျး ကောငျးလေး ကွျောငွာပေးပါရစေ”
အညောငျးမိလို့ ထိုငျးမှိုငျးနသေူမြား တဈကိုယျလုံး နာကငျြ ကိုကျခဲ နသေူမြား ရာသီ ပျေါ အညောငျးမိ တုတျကှေး ဖြားနာ ခံစားနရေသူမြား ဤ ပုံပါ အပငျကို အရှကျ အမွဈမကနျြ ပွု တျသောကျခွငျးဖွငျ့ ပြောကျကငျးနိုငျပါသညျ။
အပငျနာမညျက တောမွပေဲပငျ ပါ။ ဒသေအလိုကျ အချေါဝျေါ ပွောငျးနိုငျပါသညျ။ နောကျထပျ. ကြောကျကှဲပငျလို့လဲ ချေါပါသေးသညျ။ ဆီးကြောကျတညျ နသေူမြား သောကျပေးပါက ကြောကျကှဲကွစေပွေီး ပြောကျကငျးနိုငျသညျဟူ၏။
ပုံပါ. ဦးလေးကွီး (ကပ်ပိယ) နှငျ့ မိမိတို့ ကိုယျတိုငျ လကျတှဖွေ့ဈပါသညျ။ ဘေးဘယာတှေ ဝေးကှာကွပါစေ။
Credit : စိုကျပြိုးရေးနှငျ့ အထှထှေဗေဟုသုတ